Nutrigenetics: nutrigenético परीक्षण - पोषण आनुवंशिक परीक्षण।
Nutrigenetics: पोषण आनुवांशिक परीक्षण
न्युटिगनेटिक्सले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?
खाद्यान्न हामी प्रत्येकको लागि फरक छ। न त हामी सबै एक नै पोषक तत्व को एक नै मात्रा लिन आवश्यक छ, न त हामी सबै प्रभावकारी रूपमा एक नै वजन घटाने आहार पाउन। फरक छ पोषण.
हाम्रो आनुवंशिक पोषण परीक्षणले हामीलाई मदत गर्नेछ:
हामीलाई स्वस्थ तरिकामा खुवाउनुहोस्: किनकि हामी जान्नेछौं कि कस्ता पोषक तत्वहरूलाई हामीले बढी चाहिन्छ र हाम्रो लागि कस्तो प्रकारको आहार स्वस्थ छ
अझ बढी वजन कम गर्नुहोस्: हामी कस्तो किसिमको आहार देख्न सक्छौं हामी वजन कम गर्नेछौं
एकअर्कालाई अझ राम्रो थाहा पाउनुहोस्: तपाईं जान्नुहुन्छ कि यदि तपाईं अधिक वजन मा पूर्वनिर्धारित हुनुहुन्छ, पूर्ण महसूस, केहि स्वाद को प्रवृत्ति ...
हाम्रो स्वास्थ्य र खाना बीचको सम्बन्ध हेर्नुहोस्: तपाईं उच्च कोलेस्ट्रॉल को लागी तपाईंको प्रवृत्ति देख्नुहुनेछ, ट्राइग्लिसराइड्स को असामान्य स्तर को जोखिम ...
पुरुषहरूका लागि नमूना रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्: अंग्रेजी, जर्मन, Frances, इटालियन, Polaco र español
महिलाहरूको लागि नमूना रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्: अंग्रेजी, जर्मन, Frances, इटालियन, Polaco र español
यो अरूले भन्दा वा कम कैफीन असर किन वा धन्यवाद यो आनुवंशिक परीक्षण, तपाईंले अझ बढी जान्न छौँ, किन थप लोभी छन्, वा लागत केही थप स्वाद महसुस ...
यदि तपाईं वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ भने, nutrigenetics ले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ, धेरै। हामी भविष्यवाणी को किस प्रकार को वजन मा सबै भन्दा अधिक प्रभावी हुनेछ मा भविष्यवाणी को देख्नेछ। त्यहाँ जीनहरू छन् जुन मोटो प्रवृति देखाउन सक्छन, बोसो लगाउन र खाना खाने इच्छा राख्न। पोषणशीलताको साथ, तपाईं वजन कम गर्न र राम्रो भन्दा राम्रो महसुस गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
तपाई आफैलाई अझ राम्रो जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाई आफैलाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ यदि तपाई एक पोषण विशेषज्ञमा जानुहुन्छ र उत्तम उपकरण छ भने, 24Genetics को nutrigenética परीक्षण तपाईंको सबै भन्दा राम्रो सम्पत्ति हो।
म मेरो पोषण परीक्षण जाँच गर्न चाहन्छु
हाम्रो पोषण रिपोर्ट यस वर्गहरू छन्:
तपाईंको स्वस्थ पोषण:
यहाँ तपाईं केहि पोषक तत्वहरु लाई तपाईंको आनुवंशिक भविष्यवाणी र केहि प्रकार को खाना खपत को लागी तपाईंको प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ।
भिटामिन र खनिज:
हामी देख्न सक्छौं कि तपाईंको जीनले विभिन्न भिटामिन र खनिजहरु को चयापचय को प्रभावित गर्दछ। यससँग तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो प्रकारका भिटामिन र खनिजहरू तपाईले बढी र कुन तरिकामा लिनु पर्छ।
आफैलाई हेरचाह गर्नुहोस्:
हामी तपाइँको पूर्ववर्ती को दुई प्रकार को कोलेस्ट्रॉल को असामान्य स्तरहरु र Triglycerides को उच्च स्तर को दुखाइ को जोखिम को अध्ययन गर्छौं।
तपाईंको जीनले हामीलाई बताउनेछ यदि तपाईं एक लोभी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईं पिकिंग गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी कैफीनले तपाईंलाई असर गर्न सक्छ।
तपाईंको वजन र तपाई:
हामी तपाईंको आनुवंशिक भविष्यवाणी अधिक वजन को लागी देख्न सक्दछौं, वजन कम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागमा तपाईको कठिनाई, वजन खोने समय कस्तो किसिमको आहार हुनेछ।
हाम्रो पोषणशीलता परीक्षण एक भविष्य र स्पष्ट रिपोर्ट भविष्यवाणी को बारे मा छ कि तपाईंको जीन हामिलाई बताइए हो कि तपाईं हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो आनुवंशिक जानकारी को सबै भन्दा बाहिर जान चाहानुहुन्छ, हाम्रो सल्लाह आनुवांशिक परामर्श मा एक पेशेवर को सेवा को किराया छ।
24 genetics द्वारा प्रदान गरिएको आनुवंशिक जानकारी केवल अनुसन्धान, सूचना र शैक्षिक उपयोगहरूको लागि मान्य छ। कुनै पनि मामला क्लिनिकल प्रयोगको लागी वैध छैन।
यो परीक्षण कहाँ उपलब्ध छ?
सारा ग्रहमा। वेबमा तपाईंको अर्डर राख्नुहोस् र हामी यसलाई संसारको कुनै पनि कुनामा पठाउनेछौं।
यस परीक्षणमा मैले खाना असहमति देख्न सक्छु?
होइन, एक आनुवंशिक परीक्षाले खाना असंतोष परीक्षणको साथ केहि गर्न को लागी छैन, न त खाना एलर्जीको परीक्षण गर्दछ। तिनीहरू भिन्न परीक्षणहरू छन् जुन विभिन्न जानकारी प्रस्ताव गर्छन्। जेनेटिक परीक्षणहरू अधिक जटिल र महँगो हुन्छन्।
यो पोषणशीलता परीक्षण कसरी गरिन्छ?
यो धेरै सरल छ हामी तपाईंलाई एक किट स्वाब साथ एक किट पठाएको छ कि तपाइँ केहि सरल निर्देशनहरू पछि आफ्नो मुखमा रगत पुर्याउनु पर्छ। तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ र सेवा सम्झौतामा निर्भर गर्दछौं, हामी यसलाई एक सन्देशको रूपमा लिनेछौं वा हामी तपाईंलाई पठाउन चाहन्छौं।
के म आफ्नो स्वास्थ्य वा आहार को उपचार मा यो nutrigenetics परीक्षण को डेटा संग कठोर परिवर्तन गर्नु पर्छ?
होइन, तपाइँ आफ्नो स्वास्थ्यमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ एक विशेषज्ञ आनुवांशिक विशेषज्ञ र विशेष चिकित्सकहरू र पोषण विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिनु पर्छ।
होइन, हाम्रो शरीरले धेरै परिस्थितिहरूको जवाफ दिन्छ। जेनेटिक्स एक हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
के सबै पोषणशीलता परीक्षणहरू त्यस्ता छन्?
होइन, हाम्रो एनटिगेनटेटोइक परीक्षण संभवतया बजारमा अवस्थित सबै भन्दा पूर्ण छ।
यो पोषण आनुवांशिक परीक्षणमा आधारित छ?
यो आनुवंशिक अध्ययनहरूमा आधारित छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेकित र वैज्ञानिक समुदायले स्वीकारेको छ। त्यहाँ केहि जीवहरू र वैज्ञानिक डेटाबेसहरू छन् जहाँ अध्ययनहरू प्रकाशित गरिएका छन् जसमा व्यापक सहमति भएको छ। हाम्रो आनुवंशिक परीक्षण हाम्रो अध्ययनका जीनोटाइपमा यी अध्ययनहरू लागू गरेर प्रयोग गरिन्छ।
हामी हाम्रा रिपोर्टहरू आधारमा केही अध्ययनहरू:
जेनोम-चौडाई एसोसिएसनले एफटीओ जीनमा आनुवंशिक भिन्नता देखाउँदछ मोटापछि सम्बन्धित लक्षणसँग सम्बन्धित छन्।
एक उच्च-हृदय जोखिम जनसंख्या एक बेतरतीब नियंत्रित परीक्षण: भू-मध्य आहार तपाईं हृदय जोखिम कारक र स्ट्रोक घटना मा TCF7L2-rs7903146 polymorphism को प्रतिकूल प्रभाव कम।
भिटामिन सी Transporter जीन (SLC23A1 र SLC23A2) बहुरूठेगानाहरु, प्लाज्मा भिटामिन सी स्तर र गैस्ट्रिक क्यान्सर जोखिम महाकाव्य कोहोर्ट मा।
जीनोम एपिडेमोलोजी कंसोर्टियममा हृदय र उमेरको अनुसन्धानको लागी प्लाज्मा एनएक्सएनएमएक्स बहुसंख्यित फैटी एसिडको जीनोम-चौडाई एसोसिएशन अध्ययन।